ကာတွန်းဝင်ထွန်း- ကျွန်တော်နဲ့ အမေရိကန် နဲ့ အလုပ် နဲ့ ဘာသာစကား | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်းဝင်ထွန်း- ကျွန်တော်နဲ့ အမေရိကန် နဲ့ အလုပ် နဲ့ ဘာသာစကား
ကျွန်တော်နဲ့ အမေရိကန် နဲ့ အလုပ် နဲ့ ဘာသာစကား …
ကျွန်တော် မြန်မာပြည်မှာ BSc (Zoology) ဘွဲ့ရခဲ့ပါသည်။ (လက်မှတ်တော့ ပြစရာ ဘယ်ထားမိမှန်းမသိပါ … အဟဲ)။
ကံကောင်းတယ်ဆိုဆို ကံဆိုးတယ်ဆိုဆို … ဒီကို ၁၉၉၅ မှာရောက်လာပါတယ်။
ဘန်ကောက်ကထွက်လာမယ်လုပ်တော့ ရင်ထဲတထိတ်ထိတ်မို့ မိန်းမရှေ့အားမငယ်ဖို့ပြောပြီး ဟန်လုပ် ပြုးဖြဲဖြဲနဲ့ ရောက်လာပါတယ် … ။
ဗိုလ်လိုစကားလား … အဟီး ထမင်းစားရေသောက်တောင် ထစ်ငေါ့ထစ်ငေါ့နဲ့ဖျစ်ညှစ်ပြောတတ်ပါတယ် အဟဲ။ … ဆယ်တန်းတုန်းက အမှတ် ၄၀ ပြည့်အောင် မနည်းအလွတ်ကျက်ဖြေလာတာပါ။ အီးမေဂျာသမားတွေနဲ့လဲမခင်တော့ ကပ်ရပ် မလေ့လာခဲ့ရ မလေ့ကျင့်ခဲ့ရပါ။ … ဟိုခေတ်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ရှင်သုမနရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရေးစာအုပ်ကြီးလဲ ပါမလာခဲ့ …။
ရောက်ခါစ အာရှဒုက္ခသည်တွေအဖြစ် လက်ခံခဲ့တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းက ဝန်ထမ်း အမေရိကန်မလေးက (ABSDF ကိုဝင်းမိုးရဲ့ဇနီးသည်) … ESL (English asaSecond Language class) ကျောင်းလိုက်ပို့ပြီး အပ်ပေးပါသည်။ အဲဒီရောက်တော့ လင်မယား ၂ ယောက် ဝမ်းသာအားရ အစကနေ တက်မယ်ပေါ့။ နေစရိတ်စားစရိတ်အတွက် သူတို့ပြည်နယ်က ရဖျူဂျီတွေအတွက်ပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ ကိုး။… အခွင့်သာတုန်း ABC က စသင်မယ်ပေါ့။ … ဆရာမက ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောကြည့်တော့ မင်းက မတောက်တခေါက်ပေမယ့် နည်းနည်းမြင့်တဲ့အတန်းသွားတဲ့ … ဒါပေမဲ့ မတက်ဖြစ်ခဲ့ပါ။
သမီးကြီးကိုယ်ဝန်ရှိလာသမို့ … အလုပ် အလုပ် အလုပ် အရေးတကြီးရှာရသည်။ … အဲဒီတော့လဲ သူတို့က အလုပ်ရှာပေးကြတာပေါ့ … ။
ထားပါတော့၊အလုပ်အကြောင်းဒီနေရာမှ မပြောချင် …အလုပ်တခု အင်တာဗျူခဲ့တာတော့ ပြောပြရဦးမယ်။
Staten Island ကျွန်းက ဆေးဆိုးပန်းရိုက်စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဝင်ငွေမလောက်တော့ နယူးယောက် မိန်းကျွန်းဖြစ်တဲ့ မန်ဟက်တန်မှာ အလုပ်လျှောက်ခဲ့သည်။ (Jordache ဂျင်းကုမ္ပဏီမှာဖြစ်သည်)။ အင်တာဗျူးတော့ ကျွန်တော် အိုးနင်းခွက်နင်း တတ်သမျှ မှတ်သမျှ အင်္ဂလို ပြောရတော့တယ်။ … ထစ်အထစ်အငေါ့ငေါ့နဲ့ပေါ့။ … ဗျူးတာက မျက်နှာဖြူဗိုလ်မတဦး … ကိုရီးယာမတဦး (ကိုရီးယားမက .. ဒီကို ကလေးဘဝကလာခဲ့ပြီး ကျောင်းနေကြီးပြင်းလာသူ)ပါ။ သူတို့က စိတ်ရှည်ရှည်နားထောင်တယ် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောပြရှင်းပြသည်။ … ကျွန်တော် သူတို့ပြောတာ ဘယ်လောက်နားလည်သလဲပေါ့ … နားလည်တော့ ပုံရေးပြခိုင်းသည်။ … bobble jacket ဝတ်ထားတဲ့ teddy bear စကီးစီးပုံတဲ့။ (နှင်းပေါ်စီးတဲ့ဖိနပ်နဲ့ပေါ့) ရေးပြပါတဲ့ … ။
အဲဒီ bobble jacket ဆိုတာ ငါမသိဘူး။ မမြင်ဖူးဘူးလို့ပြောတော့ ပြခန်းထဲက ဂျာကင်ကိုယူပြတယ်။ … နောက်နေ့မှ ရေးပြီးပို့ပါတဲ့။ … အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ … ပြန်ခါနီးတော့ ကျွန်တော်က တောင်းပန်တယ်။ ငါပြောတဲ့ english … poor ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့။ … သူတို့ ၂ ယောက်လုံးက ပြောတယ်။ … ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ ငါတို့စကားပြောတတ်သူခန့်ဖို့အင်တာဗျူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ပန်းချီရေးတတ်သူ ရှာနေတာတဲ့ …။ နမူနာပြတဲ့ မင်းလက်ရာတွေ ကြိုက်တယ်တဲ့ …။ ဝက်ဝံပုံလေးရေးပြီးရင် ဒါရိုက်တာကို ပြမယ် သူသဘောကျရင် မင်းအလုပ်ရပြီတဲ့။ (အဲဒီလုပ်ရခဲ့ပါတယ်လေ။) …
ကျွန်တော် လုပ်ခဲ့သမျှအလုပ်တွေမှာ ယနေ့အထိ တကယ်ပြောရရင် ဗိုလ်လိုသိပ်ပြီး ထူးချွန်စွာ တတ်မလာပါ။ … ရောက်စနဲ့စာရင်မဆိုးပေမယ့် ခုထိ မွှတ်နေအောင် မပြောတတ်မရေးတတ် မဖတ်တတ်သေးတာအမှန်။ … ရေးရင် ဖတ်ရင် dictionary အမြဲဆောင်ပြီး လေးကန်စွာဖတ်တုန်းပါ … ။
ကိုယ့်ထက်ပိုသာသူ တတ်သူများကို လေးစားပါတယ် အားကျပါတယ် …။ (တချို့ စာတွေ ကဗျာတွေ ကာတွန်းတွေတောင် ဗိုလ်လိုရေးကြသည်။ ဂုဏ်ယူပါသည်။… တော်ကြပါသည်။ …
ကိုယ်မတတ်လို့ ပြောတာမဟုတ် … (တကယ်လဲမတတ်တာအမှန် အဟဲ)
ဘာသာစကား အချိန်ရှိတုန်းလေ့လာတတ်ကျွမ်းတာ ကောင်း၏။ … ဗိုလ်လိုတတ်တာ ဗိုလ်တွေနဲ့ အတူတူသာဖြစ်သတည်း။ သင် ဗိုလ်တွေထဲက ဗိုလ်တဦးသာဖြစ်သွားမည်ပါ့။ … ဗိုလ်တွေက တခြား အတတ်ပညာနဲ့ အလုပ်လုပ်စားကြသလို သင်မတတ်ရင် အလုပ်ရမည်မဟုတ်ပါ။ (အဲဒီမှာ … ဗိုလ်တွေ ဗမာစကားပြောတတ်တာနဲ့ အလုပ်အကြောင်းမသိပဲ သင်အလုပ်ခန့်မလား)(ဘာသာပြန် စကားပြန် အလုပ်သာရမည်လေ)
စားသောက်ဆိုင်မှာ စကားပြောတတ်လို့ စားပွဲထိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် စားပွဲထိုးတဲ့ ပညာ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်တတ်မှ အလုပ်ဖြစ်မည်လေ။ …
အာရှနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်း (ဥရောပ)က လာတဲ့လူတိုင်း … အမေရိကန်လိုသိပ်မပြောတတ် …။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တတ်တဲ့ ဆံပင်ညှပ်ပညာနဲ့အလုပ်ဖြစ်နေ၏။ ကျွန်တော်ညှပ်နေကျဆိုင်က အီတလီကြီး ဝဲတဲဝဲတဲနဲ့ စကားပြောရင် ကျွန်တော်မနည်းနားထောင်ရသည်။ သို့သော် သူဆိုင်ပိုင်ဖြစ်နေသတည်း။ ညှပ်သူမစဲ စနေနေ့ဆို အစောကြီး ဆိုင်အဖွင့်ကိုသွားစောင့် တန်းထားစီရ၏။ (တခေါင်းကို ၂၅ ဒေါ်လာလောက်ရ သည်)။
အင်တာနေရှင်နယ်မှာ ဗိုလ်လိုပြောတတ်ရုံနဲ့ သင့်ကို အထင်ကြီးမည်မဟုတ်ပါ။ … သင့်အရည်အချင်းဖြစ် သည့် တခြား သင်တတ်ကျွမ်းမှုရှိမှသာ အလုပ်ဖြစ်မည်ဖြစ်သတည်း …။
နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဗိုလ်လိုပြောတတ်တာကောင်း၏ (ဒါက အပိုပညာဖြစ်၏) … တိုင်းပြည်အတွက် အဓိက အရည်အချင်းက နိုင်ငံရေးပညာဖြစ်၏ … ဘွဲ့ပေါင်းစုံ ဆုပေါင်းစုံရတာထက် တိုင်းပြည်အတွက် လက်တွေ့ ဘာ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်သနည်း …။
အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တချို့ကိုကြည့်ပါ။ ရောက်လေရာ ဘာသာပြန်နဲ့စကားပြောချင်ေ ပြောမယ်။ … ဒါပေမဲ့ သူ့နိုင်ငံ သူဦးဆောင်ကာ ဘာတွေလုပ်နေလို့ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ဘာတွေ အောင်မြင် လဲ ကြည့်ပါ။ … ကိုယ့်ထက်တော့ သာနေကြတာအမှန်ပါ …။
ကြည့်တတ် မြင်တတ် ချီးကျူးဂုဏ်ယူတတ်ပါစေ … အားပေးတတ်ပါစေ … ထောက်ခံတတ်ပါစေ …။ (ပြောင်းလဲနိုင်ကြပါစေသတည်း)
မှတ်ချက် -(လူငယ်အများ အတတ်ပညာအဓိက ပထမထား …ဘာသာစကား ဒုတိယ ဦးစားပေးပြီး ၂ ခုလုံး လေ့လာစေချင်ပါကြောင်း)
(နိုင်ငံခြားသွား ကျောင်းတက်သူများကိစ္စနဲ့ ဘာသာပြန်ကိစ္စ၊ စကားပြန်ကိစ္စ) မပါပါ)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:စာပဒေသာ, အမေရိက
2 Responses to ကာတွန်းဝင်ထွန်း- ကျွန်တော်နဲ့ အမေရိကန် နဲ့ အလုပ် နဲ့ ဘာသာစကား
Catwoman on May 20, 2017 at 4:17 pm
Hahaha you are so wrong. Burmese people never become supervisors because they are poor with English. You have all kinds of excuses. It s essential to be fluent in English. Otherwise they look down on us. They don’t need to learn Burmese. We need to be good with English.
Catwoman on May 21, 2017 at 3:57 pm
And whose fault is that if one cannot speak after many years in the US? I came here when I was 17. I wasn’t fluent in English. I have to learn. I maphysician today. I can tell my patients and explain to them what they need to know if I don’t know how to speak. What will you do if you call 911 and can’t explain? Please don’t send wrong messages to people. There are many people stuck in dead end jobs because they can’t speak the language. Also it s not just the Burmese.
I want people to be articulate so people don’t look down in us.